eNasha.com - "हो, पश्चाताप चोरेर मलाई पश्चाताप भएको छ"
: दिव्य सुब्बा
सानो उमेर तर ख्याति ठूलो । यसो भन्दा अहिलेका चर्चित युवा गायक दिब्य सुब्बालाई बढी भनेको ठहरिन्न । किनभने पहिलो एल्बमबाट नै नाम र दाम दुवै पाउने दिब्य सुब्बाको प्रख्याति यसबाट नै थाहा हुन्छ कि उनको दोस्रो एल्बम तयार नहुँदै सम्झना अडियो भिडियोले राम्रो दाममा किनिसकेको थियो । यी गायकले केही सफलताको मीठो र केही विवादका तीतोपन पनि चाखिसकेका छन् । आज हामी यिनै गायकसँग उनको साङ्गीतिक जीवनको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ ।
दिव्य सुब्बा सङ्गीतमा कसरी तानिए भन्ने तपाइँको जिज्ञासा छ भने एउटा उखान चरितार्थ हुन्छ उनको जीवनमा । त्यो उखान हो, सङ्गीत मानिसको रगतमा हुन्छ र यदि तपाइँको परिवारमा यो छ भने तपाइँसँग पनि मिसिएर आउनेछ । अर्थात् उनको परिवारमा उनका बाबा स्वर्गीय केवल सुब्बा त्यस्ता गायक थिए, जसको पर्याप्त चर्चा हुनै नपाई उहाँको देहान्त भयो । हुन त पिता केवल सुब्बा गाउनेभन्दा पनि बजाउने कुरामा बढी चासो दिनुहुन्थ्यो, तापनि उहाँले गाएका छिरिङमा दोर्जे मेरो नाम..., सोल्टिनी भनी बोलाको...., ओम माने पेमे....जस्ता गीत त्यतिबेलाका हिट गीत हुन् । उहाँले 'विरानो मान्छे' नामक गीति एल्बम पनि बजारमा ल्याउनु भएको थियो । तर छोरा दिव्य सुब्बाको लोकप्रियताको रमाइलो महसूस गर्न नपाई उहाँको देहान्त भयो ।
सानो छँदा आफ्ना बुवाले देखाएका कतिपय बाटा र सिकाएका कतिपय सरगम उनलाई यतिबेला काम लागेको छ । उनी ठान्छन्, उनको व्यसायिक सफलता र गायकीको मीठास आफ्नो स्वर्गीय पिताको उत्साहको नतिजा हो । आउनुहोस्, उनै गायकसँग आज हामी भलाकुसारी गरौँ-
नामः दिव्य सुब्बा
बुवाः केवल सुब्बा
आमाः रमा सुब्बा
जन्मः २४ सेप्टेम्बर
स्कुलः तीन चार वटा चेञ्ज गर्नुपर्‍यो । ५ कक्षा सम्म धरान र त्यसपछि काठमाडौँ ।
कुराकानी बच्चाबेलादेखि नै गरौँ, तपाइँको बुवा सुब्बा र आमा चाहिँ नेवार । यस्तो अवस्थामा तपाइँहरुको पारिवारिक जीवनमा सामाजिक अप्ठेरो केही भोग्नु पर्‍यो ?
म सानै भएकाले त्यस्तो अप्ठेरोको मलाई महसूस नै भएन ।
तपाइँ बालककालमा कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ? छुच्चो कि शान्त ? पढाइमा ध्यान दिने कि बदमास ?
ठीकैको । किनभने मलाई त्यस्ता बदमासीहरु अहिले याद छैनन् । पढाइमा पनि राम्रै थिएँ ।
तपाइँले त निकै स्कूल चेञ्ज गर्नु भयो नि, किन ?
ममी पापाहरु काठमाडौँ सिफ्ट भएपछि मैले पनि दुइ तीन वटा स्कूल चेञ्ज गर्नुपर्‍यो । खासगरी हामी धरानबाट काठमाडौँ चाहिँ ब्रि्रुँला कि भनेर र्सर्नु भएको थियो । किनभने त्यहाँ धेरै सङ्गत चाहिँ लाहुरेका छोराछोरीसँग थियो । उनीहरुको सङ्गतमा म ब्रि्रुँला भन्ने पीर पनि थियो क्यारे !
कुनबेला तपाइँलाई अनुभव भयो, म पनि बुवाजस्तै सङ्गीतकर्ममा लाग्छु भनेर ?
बाबाले मलाई विभिन्न सरगमहरु सिकाउनु हुन्थ्यो । उहाँले नियमित रियाज गराउनु हुन्थ्यो । तर त्यतिबेला मलाई म सङ्गीतमा लाग्छु होला जस्तो चाहिँ लाग्दैनथ्यो ।
तपाइँले बुवाले चर्चा नपाउनुमा मिडियाको कमी भन्नु भयो, चर्चा पाउन मिडिया हुनु पर्छ प्रतिभा हुनुपर्छ ?
दुवैको कमी हो । उहाँले एल्बम निकाल्नु भएको थियो, केही गीत हिट पनि थिए तर उहाँलाई धेरैले चिन्दैनथिए । उहाँको जस्तो प्रतिभा र अहिलेको जस्तो मिडिया भएको भए, उहाँ अहिलेको नाम चलेको सङ्गीतकर्मीका रुपमा चिनिनु हुने थियो ।
पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा कहिले गाउनु भएको थियो ?
गाएको चाहिँ होइन, मैले बजाएको थिएँ । तर त्यसले मलाई भीडका अघिल्तिर उभिने हिम्मत दियो । यो हिम्मतकै कारण पछि गाउन थालेँ । त्यसबेलाका गायकी उति राम्रो नभए पनि पाएको पोजिटिभ रेस्पोन्सले मलाई हौसला दियो ।
एउटा गायकले शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न जरुरी छ कि छैन ?
उसको रुचिको कुरा हो यो चाहिँ । किनभने कोही शास्त्रीय सङ्गीत नसिकी पनि हिट भएका छन्, राम्रा गायकका रुपमा परिचित छन् भने कोही भने शास्त्रीय सङ्गीत सिकेर पनि हिट हुन सकेका छैनन् र त्योभन्दा ठूलो कुरा गायकी जमाउन सकेका छैनन् । तर मेरो निजी विचारमा यो राम्रो कुरा हो । आज कतिपय राम्रा चिजहरु मैले शास्त्रीय सङ्गीत सिकेका कारणले नै प्रयोग गर्न सिकेको छु । मलाई बाबाले बिहान बिहान रियाज गर्न नलगाउनु भएको भए या डोरेमी सङ्गीत विद्यालयमा नहालिदिनु भएको भए, म अपूरो गायक हुन्थेँ । जे होस्, धेर होस्, थोर होस्, मलाई शास्त्रीय सङ्गीतबारे जानकारी छ ।
आजको दिनमा गायक हुनुको फाइदा के छ ?
तपाइँले राम्रो काम गर्नु भयो भने चाँडै चर्चा पाउन सक्नु हुन्छ । बाबाको विरानो मान्छे नामको एल्बम निस्किएको थियो तर पछिसम्म म आफैँलाई यो कुरा थाहा थिएन । अझै पनि कतिपय व्यक्तिहरुले बुवाका हिट गीतहरुको रुपमा छिरिङमा दोर्जे मेरो नाम..., सोल्टिनी भनी बोलाको..., ओम माने पेमे...जस्ता गीतलाई चिनाउँछन् । आजको मितिमा ती गीत गाइएका भए उहाँ लोकप्रिय गायकका रुपमा चिनिनु हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
पहिलो गीत कुनबेला रेकर्ड भयो ?
म मुस्किलले १३/१४ वर्षो थिएँ त्यतिबेला । फूर्सदको समयमा बाबाले लेख्नु भएको र म्युजिक दिनुभएको गीत सुनसान रातमा... रेकर्ड गरेको थिएँ । त्यो बेला नमस्ते स्टुडियो निकै चल्तीमा थियो । त्यहीँ रेकर्ड गरेको थिएँ । गीत त मलाई मन परेको थियो । तर कुनै पनि एफएममा बजेन ।
अनि एल्बम निकाल्ने योजना चाहिँ ?
जब एसएलसी सकेँ, मैले पहिले नै योजना बनाइसकेको थिएँ कि अब एल्बम निकाल्नु पर्छ । त्यो योजनाअनुसार मैले गीत रेकर्ड गरेँ । २०६० मा नै एल्बम निकाल्नु पर्ने थियो तर यति दुःख पाइयो कि एल्बम तीन वर्षपछि मात्र निस्कियो ।
कम्पनीले कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने ! एल्बम निकाल्न पनि यति सय सीडी किन भनेर दवाव दिने । भिडियो पनि आफैँ बनाउनु भन्ने । यसले गर्दा त म फस्ट्रेट भइसकेको थिएँ । यसैबेला, अग्लीज ब्याण्डको पहिलो एल्बम 'रस' निस्कियो, हिट पनि भयो । यही कम्पनीमा एक पटक गएर प्रस्ताव राख्नु पर्‍यो भनेर गएको थिएँ । उहाँले सीडी राख्नु भयो र पछि कन्ट्याक्ट गरौँला भन्नुभयो । खासमा मैले सितु डिजिटलको नाम पनि सुनेको थिइनँ । तर उहाँहरुले नै एल्बम निकाल्ने र भिडियो बनाइदिने प्रस्ताव राख्नु भयो ।
ज्यादै खुशी लाग्यो होला, हगि ?
ज्यादै ! त्यसको त बयानै गर्न सकिन्न ।
त्यो भन्दा पनि खुशी त एल्बम चलेपछि भयो होला ?
एल्बम निस्किएको दुइ तीन महिनासम्म त मैले केही रेस्पोन्स पाइनँ । तर पछि भिडियो हिट भयो, त्यसपछि चाहिँ बजारको रेस्पोन्स पनि राम्रै पाएँ । मेरो केसमा चाहिँ मिडियाले भन्दा श्रोताले हिट गराउँदा रहेछन् ।
तर एल्बम हिटसँगै अवार्ड पनि पाउनु भयो, दुवै हातमा लड्डु, होइन त ?
अँ इमेज अवार्डमा बेस्ट न्यू आर्टिष्टमा अवार्ड पाएको थिएँ । यता एल्बमको बिक्री पनि राम्रो थियो । तपाइँले भनेजस्तै दुवै हातमा लड्डु चाहिँ थियो त्यसबेला ।
तर त्यही एल्बमको पश्चाताप भन्ने गीत त तपाइँले चोरेको मेलोडी र ट्यून पर्‍यो भन्ने हल्ला आयो नि ?
साँचो कुरा त साँचो भन्नु पर्‍यो । मैले पश्चाताप गीतको मेलोडी चोरेकै थिएँ । मिडियामा मैले त्यही भनेँ ।
कसरी यो मेलोडी पाउनु भयो ?
एक पटक म हंगकंग जाँदा मेरी एक जना भाउजू फिलिपिनो हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई धेरै गीत सुनाउनु हुन्थ्यो त्यहाँको । ती धेरैमध्ये यो गीतको ट्यून चाहिँ मेरो हृदयमा बस्यो । पछि मैले अनेक शब्द त्यो मेलोडीसँग मिलाउने प्रयास गरेँ । यो गीत मैले सबैभन्दा लास्टमा रर्ेकर्ड गरेको थिएँ । मलाई थाहा थियो, यसले सबैलाई छुन्छ । त्यसैले पनि चोरिएको ट्यून भए पनि आफ्नो करियरका लागि मैले बदमासी गरेँ । तर यही गीतले म चर्चामा आउँला भन्ने लागेको चाहिँ थिएन । यो चर्चा मैले सोचेभन्दा बढी थियो । तर सँगसँगै के लाग्छ भने यो एल्बम हिट नभएको भए, मैले यो मेलोडी चोरेको थिएँ वा थिइनँ भन्ने कुराको चर्चा पनि हुने थिएन होला ।
हिट भइएपछि दवाव हुन्छ रे नि हो ?
मलाई बाबाले पहिले यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो, हिट हुनु ठूलो कुरा होइन, तर हिट भइरहन र सस्टेन हुनु ठूलो कुरा हो । त्यतिबेला मलाई बडो वाहियात कुरा लाग्थ्यो । अहिले म उहाँलाई झल्झली सम्भिmरहेको छु । अहिले मलाई त्यही कुरा लागू भइरहेको छ । गीत र एल्बम दुवै हिट भएपछि एक किसिमको दवाव बोकेर गायक हिँडिरहेको हुन्छ । त्यो दवाव सामाजिक हुन्छ, स्ट्याटसको हुन्छ, आर्थिक हुन्छ ।
अहिले त निकै पछि दोस्रो एल्बम निकाल्नु भएछ, त्यो पनि कम्पनी चेञ्ज गरेर ?
अँ, मलाई सितु डिजिटलले भन्दा सम्झना अडियो भिडियोले राम्रो 'डिल' दिएकाले कम्पनी चेञ्ज गरेको हुँ । हामीजस्तो गायकको आयु थोरै हुन्छ । हिट भएको बेला राम्रोसँग 'डिल' गरिएन भने जीवनभर थक्क थक्क भइन्छ । यदि कम्पनीले हामीबाट फाइदा लिन्छ भने हामीले पनि कम्पनीबाट चाहिँदो फाइदा लिनु पर्छ । त्यही भएर मैले कम्पनी चेञ्ज गरेको हुँ ।
पहिलो एल्बमभन्दा यो दोस्रो एल्बम परम्परा के अर्थमा भिन्न छ ?
पहिलो एल्बम मेरो सिर्जना वा मेरो बुद्धिको प्रतिफल हो । यो मेरो मात्र बुद्धिको परिणति हो । तर दोस्रोमा चाहिँ यसमा धेरै जनाको बुद्धि, योग्यता, क्षमता र सिर्जना हालेको छु । मेरो एकल बुद्धि मात्र छैन । त्यसैले मलाई विश्वास छ, यो पहिलो भन्दा तगडा हुन्छ । अर्को कुरा चाहिँ यसमा मैले जुन क्वालिटी दिने प्रयास गरेको छु, त्यो पहिलोभन्दा निकै 'बेटर' छ । कस्तो भने, यसमा पहिलेको भन्दा राम्रो म्युजिक छ, राम्रो लिरिक छ र राम्रो स्वर बनाउने प्रयास गरेको छु । र, यो परम्परागत म्युजिकभन्दा फरक छ- रेगुलर छैन । यो फरक भएकाले शुरुमा सुन्दा नपच्न पनि सक्छ । मलाई थाहा छ, नयाँ कुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ ।
भविष्यसम्म सङ्गीत क्षेत्रमा भइन्छ कि विदेश जाने योजना छ ?
विदेश जाने मेरो कुनै योजना छैन । मेरो पहिलो र अन्तिम अप्सन नै नेपाल र नेपाली म्युजिक हो । त्यसैले मैले अन्य कुरा सोचेको छैन । मैले एक पटक हंगकंगको आइडीका लागि प्रयास गरेको थिएँ तर असफल भएँ । अब नेपाल नै मेरो सबैथोक र सबैथोक नै नेपाल हुन पुगेको छ ।
नयाँ एल्बमको लागि के काम हुँदैछ त ?
म नयाँ एल्बम पाइरेसी नहोस् भन्ने कुरामा निकै सचेत छु र अबका छ महिना यसैविरुद्ध विभिन्न स्कुल तथा कलेजमा गएर विद्यार्थीहरुलाई हौस्याउँदैछु । भिडियो पनि बन्दैछ । र, शायद यसले मलाई निराश बनाउने छैन ।
रिलिज गायक नेपाली तारा सङ्गीतकार उपलब्धि समुद्रपार प्रेम र विवाह अवार्ड लुकेका कुरा कीर्तिमान भिडन्त क्या बात ! विचार तातोपीरो गीतकार ट्रयाक बाहिर रुचि गायिका पेज थ्री हल्ला